136s Andrew Cuomo caannimadiisii ​​lama filaanka ahayd intii uu socday cudurka faafa ee coronavirus images and subtitles
-Guddoomiyaha New York Andrew Cuomo ayaa soo muuqday isagoo ka mid ah siyaasiyiinta sida aadka ah u xilalka haya intii uu socday dillaaca coronavirus. -Waxaan wali haysannaa dariiqa kor u kacaya. -Faafida faafida degdegga ah ee dalka Mareykanka wuxuu nolol maalmeedka u beddelay Mareykanka. On top of xaalad hore u walwalsan oo jahwareer ah waa lakab dheeri ah oo isugu jira farriimo isku dhafan oo siyaasadeed. -Waxaad fiirisaa shilalka gawaarida, kuwaas oo aad uga badan tirooyinka aan ka hadlayno. Taasi micnaheedu maahan inaan u sheegno qof walba, Gawaarida dambe ma sii socdaan. - Laakiin Cuomo wuxuu ku dadaaley inuu bixiyo caddayn ee uu warbixinno maalinle ah. New York waxay leedahay kiisas badan oo la xaqiijiyay oo ku saabsan coronavirus in ka badan gobol kasta. Cusbooneysiinta Cuomo ayaa si cad u sheegaysa baahiyaha gobolkiisa. -Qaaradaha, hawo-mareyaasha, hawo-mareenka. Waxaan u baahanahay 30,000. -Waxaa sidoo kale gudoomiyaha uu shaqsi ahaan isku dayay si loo dejiyo cabsida sii kordheysa. -Waxaan arki karaa sida ay dadka reer New York wax u qabanayaan. Waan arki karaa sida New Yorkers ay midba midka kale ula dhaqmayaan. Waxaan arkaa 6,000 mutadawiciinta caafimaadka maskaxda ah. Waxaan arkaa 40,000 shaqaalaha daryeelka caafimaadka ah oo kor u socda. Waxaan arkaa iibiyaasheyda oo i soo wacaya, iyagoo leh, Waan caawin karaa. Taasi waa New York. Taasi waa New York. - Natiijada ka dhalatay, faahfaahinta ayaa noqotay daawashada ballamada loogu talagalay dadka reer New York iyo wixii ka dambeeya. Cuomo sidoo kale si aad ah buu uxugnaa isagoo fikirradiisa ka dhiibtay maamulka Trump. Bilowgii xiisadda, Cuomo iyo Trump ayaa bilaabay iyada oo la iska fogeeyo khilaafaadka. -Laakiin madaxweynaha iyo aniga waxaan shalay isla gaarnay, fiiri, waxaan la dagaallameynaa isla dagaal, tanina waa dagaal. - laakiin markii ay xaaladdu ka sii dartay, gadaal iyo gadaalba noqday mid aad u kulul. -Ma waxaad dooneysaa inaad dusha gadaal u dirto 400 oo hawo-mareenka? Maxaan ku qabannaa 400 oo hawo-mareeno ah? markaan u baahanahay 30,000 oo hawo-mareenka. - laakiin, waad ogtahay, haddii aad ka fikirto Guddoomiyaha Cuomo, waxaan u dhisi doonnaa afar isbitaal. Waxaan u dhisi doonnaa afar xarumood oo caafimaad. Waxaan si aad iyo aad ah ugu shaqeyneynaa dadka New York. Waan la shaqeynaynaa isaga, ka dibna waxaan ku daawadaa isaga oo ka cabanaya. -Maxaa laga yaabaa in haddii Trump uu yimaado inta lagu gudajiro warbixinnada Cuomo ama haddii kale, cusboonaysiintaan maalinlaha ah ee uu soo gaaro gudoomiyaha ayaa noqotay mid asaasi ah loogu talagalay dadka reer New York ee doonaya hagis iyo raaxo. -Waan u samayn doonaa maxaa yeelay waan jeclahay New York, waana ku jeclahay New York maxaa yeelay New York waa ku jeclahay.
Andrew Cuomo caannimadiisii ​​lama filaanka ahayd intii uu socday cudurka faafa ee coronavirus
< start="0.12" dur="1.92"> -Guddoomiyaha New York Andrew Cuomo ayaa soo muuqday >
< start="2.04" dur="2.2"> isagoo ka mid ah siyaasiyiinta sida aadka ah u xilalka haya >
< start="4.24" dur="1.79"> intii uu socday dillaaca coronavirus. >
< start="6.03" dur="2.4"> -Waxaan wali haysannaa dariiqa kor u kacaya. >
< start="8.43" dur="2.14"> -Faafida faafida degdegga ah ee dalka Mareykanka >
< start="10.57" dur="2.07"> wuxuu nolol maalmeedka u beddelay Mareykanka. >
< start="12.64" dur="3.03"> On top of xaalad hore u walwalsan oo jahwareer ah >
< start="15.67" dur="2.43"> waa lakab dheeri ah oo isugu jira farriimo isku dhafan oo siyaasadeed. >
< start="18.1" dur="2.7"> -Waxaad fiirisaa shilalka gawaarida, >
< start="20.8" dur="2.97"> kuwaas oo aad uga badan tirooyinka aan ka hadlayno. >
< start="23.77" dur="2.26"> Taasi micnaheedu maahan inaan u sheegno qof walba, >
< start="26.03" dur="1.35"> Gawaarida dambe ma sii socdaan. >
< start="27.38" dur="2.14"> - Laakiin Cuomo wuxuu ku dadaaley inuu bixiyo caddayn >
< start="29.52" dur="1.31"> ee uu warbixinno maalinle ah. >
< start="30.83" dur="2.58"> New York waxay leedahay kiisas badan oo la xaqiijiyay oo ku saabsan coronavirus >
< start="33.41" dur="1.43"> in ka badan gobol kasta. >
< start="34.84" dur="3.09"> Cusbooneysiinta Cuomo ayaa si cad u sheegaysa baahiyaha gobolkiisa. >
< start="37.93" dur="3.59"> -Qaaradaha, hawo-mareyaasha, hawo-mareenka. >
< start="41.52" dur="1.38"> Waxaan u baahanahay 30,000. >
< start="42.9" dur="1.9"> -Waxaa sidoo kale gudoomiyaha uu shaqsi ahaan isku dayay >
< start="44.8" dur="1.35"> si loo dejiyo cabsida sii kordheysa. >
< start="46.15" dur="3.22"> -Waxaan arki karaa sida ay dadka reer New York wax u qabanayaan. >
< start="49.37" dur="3.37"> Waan arki karaa sida New Yorkers ay midba midka kale ula dhaqmayaan. >
< start="52.74" dur="2.67"> Waxaan arkaa 6,000 mutadawiciinta caafimaadka maskaxda ah. >
< start="55.41" dur="4.1"> Waxaan arkaa 40,000 shaqaalaha daryeelka caafimaadka ah oo kor u socda. >
< start="59.51" dur="3.48"> Waxaan arkaa iibiyaasheyda oo i soo wacaya, iyagoo leh, Waan caawin karaa. >
< start="62.99" dur="2.83"> Taasi waa New York. Taasi waa New York. >
< start="65.82" dur="2.45"> - Natiijada ka dhalatay, faahfaahinta ayaa noqotay daawashada ballamada >
< start="68.27" dur="1.48"> loogu talagalay dadka reer New York iyo wixii ka dambeeya. >
< start="69.75" dur="1.81"> Cuomo sidoo kale si aad ah buu uxugnaa >
< start="71.56" dur="1.77"> isagoo fikirradiisa ka dhiibtay maamulka Trump. >
< start="73.33" dur="2.54"> Bilowgii xiisadda, Cuomo iyo Trump ayaa bilaabay >
< start="75.87" dur="2.22"> iyada oo la iska fogeeyo khilaafaadka. >
< start="78.09" dur="2.36"> -Laakiin madaxweynaha iyo aniga waxaan shalay isla gaarnay, fiiri, >
< start="80.45" dur="3.83"> waxaan la dagaallameynaa isla dagaal, tanina waa dagaal. >
< start="84.28" dur="2.48"> - laakiin markii ay xaaladdu ka sii dartay, gadaal iyo gadaalba >
< start="86.76" dur="1.57"> noqday mid aad u kulul. >
< start="88.33" dur="3.39"> -Ma waxaad dooneysaa inaad dusha gadaal u dirto 400 oo hawo-mareenka? >
< start="91.72" dur="2.76"> Maxaan ku qabannaa 400 oo hawo-mareeno ah? >
< start="94.48" dur="3.03"> markaan u baahanahay 30,000 oo hawo-mareenka. >
< start="97.51" dur="2.64"> - laakiin, waad ogtahay, haddii aad ka fikirto Guddoomiyaha Cuomo, >
< start="100.15" dur="1.88"> waxaan u dhisi doonnaa afar isbitaal. >
< start="102.03" dur="2.09"> Waxaan u dhisi doonnaa afar xarumood oo caafimaad. >
< start="104.12" dur="3.92"> Waxaan si aad iyo aad ah ugu shaqeyneynaa dadka New York. >
< start="108.04" dur="0.98"> Waan la shaqeynaynaa isaga, >
< start="109.02" dur="2.19"> ka dibna waxaan ku daawadaa isaga oo ka cabanaya. >
< start="111.21" dur="2.92"> -Maxaa laga yaabaa in haddii Trump uu yimaado inta lagu gudajiro warbixinnada Cuomo ama haddii kale, >
< start="114.13" dur="2.4"> cusboonaysiintaan maalinlaha ah ee uu soo gaaro gudoomiyaha ayaa noqotay mid asaasi ah >
< start="116.53" dur="2.72"> loogu talagalay dadka reer New York ee doonaya hagis iyo raaxo. >
< start="119.25" dur="5.17"> -Waan u samayn doonaa maxaa yeelay waan jeclahay New York, >
< start="124.42" dur="4.58"> waana ku jeclahay New York maxaa yeelay New York waa ku jeclahay. >